Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ebe ezumike US kachasị na nke dị ọnụ ala
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ebe mgbochi njem ka na -aga n'ihu, ọtụtụ ndị America karịa mgbe ọ bụla na -ahọrọ ezumike nso ụlọ.
Ọmụmụ lere obodo kacha ukwuu na United States iji chọpụta ebe ndị njem kacha dị ọnụ ala.
Oklahoma City bụ ebe kachasị ọnụ maka ezumike obodo US.
New York City bụ ebe ezumike US kachasị ọnụ.
Site na mmachi njem nke pụtara ọtụtụ ndị America karịa mgbe ọ bụla na -ahọrọ ezumike nso ụlọ, ndị ọkachamara njem ekpughere ebe ezumike US kachasị ọnụ na nke kachasị ọnụ iji kpalie njem gị ọzọ!
Ọmụmụ ihe ahụ lere obodo ndị kacha ibu na mba ahụ ịchọpụta nke kacha dị ọnụ ala, dabere na ihe dịka nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ọnụ ahịa ụlọ nkwari akụ na njem.
Ebe iri kacha dị ọnụ ala na US
n'usoro mmetụta Biya Mmanya Nri ụlọ oriri na ọuranụ .ụ Ụgbọ ala tagzi (1km) Tiketi ụgbọ njem mpaghara otu ụzọ Ọnụ ego ụlọ oriri abalị (ngwụsị izu) Ọnụ ego ezumike nka /10
7 Ihe Dị Oké Ọnụ Ahịa, Texas $ 3.00 $ 12.00 $ 15.00 $ 1.12 $ 2.50 $ 145 7.70
Ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara na Oklahoma City bụ ebe kachasị ọnụ ala maka US nkwụsị obodo. Obodo ahụ dị ọnụ ala maka ọkara nke ihe nyochara, na -efu naanị $ 3 maka biya, $ 11.50 maka nri n'ụlọ nri, yana $ 106 maka otu abalị na họtel! Ọ bụrụ na Old West masịrị gị, mgbe ahụ Oklahoma City ga-abụrịrị nleta, ebe ị nwere ike ịga na National Cowboy & Western Heritage Museum, nwalee aka gị n'ịdọ ụdọ na ịkwa ehi na ịnya ịnyịnya na ebe a na-azụ anụ ụlọ, ma ọ bụ were rodeo!
Indianapolis bụ obodo ọzọ dị oke ọnụ ahịa ịga leta, nọ n'ọkwa nke abụọ. Ụgbọ njem dị ọnụ ala karịa, yana tiketi otu ụzọ na njem mpaghara na-efu naanị $ 1.75, na njem tagzi 1km na-akwụ $ 1.24. Tuscon sochiri ya, nhọrọ a ma ama maka ndị chọrọ ịga na National Park Saguaro na otu n'ime obodo ndị dị ọnụ ala ileta!
Ebe 5 kacha dị ọnụ ala na US
1 Obodo New York, New York $ 7.81 $ 15.00 $ 20.00 $ 1.86 $ 2.75 $ 309 2.56
5 Filadelfia, Pennsylvania $ 5.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 3.42 $ 2.50 $ 244 3.94
Dị ka otu n'ime ebe ndị njem ama ama, ọ bụghị naanị na US kamakwa n'ụwa, ọ bụ ihe ijuanya ịhụ nke ahụ New York City bụkwa ebe ezumike US kachasị ọnụ, ebe agbata obi Brooklyn nọ n'ọkwa nke anọ. NYC bụ obodo kachasị ọnụ maka anọ n'ime metrik isii lere anya: biya ($ 4), karama mmanya ($ 7.81), nri ụlọ oriri ($ 15), na ọnụnọ ụlọ oriri ($ 20 kwa abalị).
Obodo ọzọ ama ama ama ama na -ewere ọnọdụ nke abụọ, yana San Francisco dabara na New York ma a bịa n'ụfọdụ ọnụ ahịa na -adịghị anya n'azụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Nakwa ebe ọ na-ewu ewu nke ukwuu n'ihi akara ala ya na ihe owuwu ụlọ ya, obodo ahụ bụkwa otu n'ime ndị na-enweta ego kachasị na US, nke na-akwalitekwa ọnụ ahịa maka ndị ọbịa.